IJabra Elite 85t, kumgangatho ophezulu wokumamela kunye nokucinywa kwengxolo | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | Izithethi, ngokubanzi, Umfanekiso kunye nesandi, Reviews
Jabra yinkampani yeaudiyo ebisikhapha kunye neemveliso zazo zonke iimfuno ixesha elide, sicebisa ukuba ujonge kuhlolo lwethu lwangaphambili ukufumana umbono. Ngeli xesha siza kudibana nenye yezona mveliso "zepremiyamu" yazo zonke izinto ezenziwe nguJabra ukuza kuthi ga ngoku.
Ii-headphone zeJabra Elite 85t zime kwiindlela zika-Apple kunye no-Sony ngaphandle kobunzima. Fumanisa nathi ezi Jabra Elite 85t kolu hlalutyo olunzulu lomgangatho wabo wokumamela kunye nokucinywa kwengxolo, uza kuyiphosa? Ngokuqinisekileyo akunjalo.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Inzwa ngaphezu kwe-aesthetics
2 Unxibelelwano kunye nokusetyenziswa
3 Umgangatho weaudiyo
4 Ukucinywa kwengxolo kunye nokuzimela
Uyilo kunye nezixhobo: Inzwa ngaphezu kwe-aesthetics
IJabra, ngaphandle kokuma ngamandla kunye nomgangatho wokudityaniswa kweemveliso zayo, ayisiyiyo into yokuba ibisoloko idume kuyilo lobuhle ngokukodwa. Olu hlobo luyabonakaliswa kwakhona kwiJabra Elite 85t, ii-headphone ezikude nezona zintle kakhulu kwintengiso. Ngokubanzi zikhulu kwaye zishinyene, kwaye azibonakali ngokukhanya ngakumbi. Kule meko, sizamile uhlelo oludibanisa iithoni ezimnyama nezobhedu kwiinkcukacha eziphambili. Nangona kunjalo, yonke into ilinganiswa eJabra.
Ii-headphone: 23,2 x 18,6 x 16,2mm
Ityala: 64,8 x 41 x 28,2 mm
Ii-headphone: 6,9 iigrem nganye
Ityala: 43,7 iigrem nganye
Uyilo lwayo luyilelwe ukulingana kwindlebe yethu kwaye luphumle kuyo. Ngokubanzi, bakhululekile kubasebenzisi "abalahli" ii-headphone ezisezindlebeni. Nangona kunjalo, kufuneka ndivume ukuba andikhululekanga hayi kwezi ntloko, kodwa zonke ezi zikule fomathi, ezingazukuchaphazela kakubi uhlalutyo lwethu. Ngale ndlela, ngamafutshane, sifikelela kwisigqibo sokuba ezi Jabra Elite 85t ayizizo ngqo ii-headphone eziza kukhanya kuyilo lwazo oluhle, kodwa kumgangatho wazo wokwakha kunye ne-ergonomics.
Unxibelelwano kunye nokusetyenziswa
Ezi IJabra Elite 85t unxibelelwano lweBluetooth 5.0, ezakusinceda ukwenza unxibelelwano oluzenzekelayo ngaphandle kwamacingo ngokukhawuleza xa sizikhupha ecaleni. Kweli candelo, ukusebenza yinto enokulindelwa kumashishini. Sine-codec yokuhambisa SBC umculo wefomathi "jikelele" kwaye siqhubela phambili AAC Ye-Apple yeyakho xa sisebenzisa iMac, i-iPhone okanye i-iPad. Ngokufanayo, ii-headphone ziyahambelana ngokubanzi nazo zonke iintlobo zezixhobo.
Isicelo, esasivavanye ngaphambili kolunye uphononongo, sisidibanisi. Via Jabra Isandi +, ziyafumaneka kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, uya kuba nakho ukwenza ngokwezifiso iiparameter ezininzi zeefowuni ezakwenza ukuba amava akho aphelele. Esi sicelo sisiqabane esifanelekileyo esiza kusivumela ukuba sihlengahlengise amanqanaba amahlanu okusebenza kokurhoxiswa kwengxolo, kunye nefayile ye- Imvul Ukunciphisa ingxolo yomoya, khetha umncedisi welizwi, ukubanakho ukukhangela ii-headphone zethu kwaye ngaphezulu kwazo zonke izinto ezihlaziyiweyo ziyafumaneka kwi app (kwividiyo yethu ungayibona isebenza).
Los IJabra Elite 85t Ngumsebenzi owenziwe kakuhle ngokubhekisele kwii-headphone ze-True Wireless (TWS), apho sifumana ukunyaniseka okuyinyani, kungenjalo kuhlalutyo lwethu. Ihlala kwinqanaba elifanayo njengabanye abakhuphisana nabo kwimarike xa kuziwa kuluhlu lwamaxabiso, ewe, okona kuncinci kunokulindelwa.
Ephakathi kunye nephezulu: Sifumana isimilo esifanelekileyo solu hlobo lwamaxesha, kunye nesakhono sokutshintsha phakathi kwawo, ukuguquguquka kwamandla kunye nangaphezulu kwako konke ukuthembeka ngokubhekisele kwisandi esikhutshiweyo. Amazwi eemvumi kwiimvavanyo zethu kunye neArtic Monkeys kunye noKumkanikazi ziveliswe ngokuchanekileyo.
Phantsi: Kule meko, uJabra usenokuba "urhwebo" ngokugqithileyo ngokunikezela ngeebhasi eziphuculweyo ngokumangalisayo, kuyinyani ukuba bayonwatyiswa kakhulu ngumculo othile wangoku wentengiso, kodwa bangena nakwimixholo xa sitshintshela elulwalweni.
Ngayiphi na imeko, eli nqanaba likhankanywe ngasentla lezinto eziphantsi ezinokuphuculwa zinokoyiswa ngokwenza uhlengahlengiso kwi isilinganisi yesicelo. Kuphosakele mhlawumbi ukuba babekhethe iaudiyo enye into "efuna" ngakumbi nge-aptX codec.
Ngokubhekisele kwiminxeba, Ezi headphone zibonise ukukhula okuhle kongenelelo, siqinisekisile ukuba asimameli kakuhle kuphela, kodwa sikwasiva ngokucacileyo, ngaphandle kwemeko zomoya nengxolo yangaphandle esonjululwe ngokuqaqambileyo.
Ukucinywa kwengxolo kunye nokuzimela
Ngokumalunga nokucinywa kwengxolo, kufanele kuqatshelwe ukuba ndiyifumene intle kwaye mhlawumbi singayibeka phakathi kwezona ndawo zintlanu zokurhoxiswa kwengxolo kwezixhobo zeNene ezingenazingcingo. Imowudi ye-HearThrough Iyahlangabezana noko kufunwayo, nangona kuyinyani ukuba ayifikeleli kwinqanaba labakhuphisana nemowudi ye-AirPods Pro-style "transparency", kodwa iyayisombulula ngendlela ephawulekayo. Ukusetyenziswa kwesiqhelo, ukurhoxiswa kwengxolo kungaphezulu kokwaneleyo kwaye kufezekisa ubuncinci oko ikuthembisayo.
Ngokutshaja ngaphandle kwamacingo kweQi
Ngokumalunga nokuzimela, inkampani iqinisekisa ngokuthembisa okungaphezulu koku Iiyure ezintlanu zokudlala umculo iyaqhubeka kwimeko yokuba sinokurhoxiswa kwengxolo rhoqo. Nangona kunjalo, ukuzimela kuchazwa ngaphezulu kakhulu kunoko, umthamo esivelisa kuwo umxholo uza kwenza le bhetri yahluke, kwaye inyani kukuba kuvavanyo lwethu sizifumene iiyure ezintlanu ezithembiswa nguJabra. Ukubahlawulisa ngokupheleleyo, siya kudinga malunga nesibini ukuba sibiza kuphela ii-headphone kwimeko, ngelixa ukutshaja zonke izixhobo kuthatha malunga nemizuzu engama-40. Kwinqanaba elichazayo lokuzimela iJabra 85t yimveliso engaphezulu kokwaneleyo.
Ezi Jabra Elite 85t onokuzithenga kwiAmazon ukusuka kwi-229 euro Ziyimveliso yokusebenza ephezulu ejonge ngqo kukhuphiswano. Bazisa izinto abazithembisileyo, ngaphandle kwamathandabuzo, kodwa basaswele ukongezwa kwemveliso ethile yobuhle, enokwenza ukuba abanye abasebenzisi baphinde bacinge ngokuthenga kwabo. Ixabiso liphezulu, kodwa kwelinye icala, umgangatho wesandi ulunge kakhulu, kunye nokucinywa kwengxolo.
Umgangatho womculo oqaqambileyo
Enye ye-ANC ehamba phambili kwimarike
Uyilo lomngcipheko ophantsi
Ndikhumbula inkxaso engaphezulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IJabra Elite 85t, phezulu kumgangatho weaudiyo kunye nokucinywa kwengxolo